ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အကူအညီ
VOA ရေဒီယိုညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု(ဇူလှိုင်၂၇၊၂၀၂၁)
COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာတက္ကသိုလ် (MAEU) က အင်ဂျင်နီယာတွေက ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေတီထွင်ပြီး အကူအညီပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် သုတေသနဌာန ပါမောက္ခဌာနမှုး ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်က ပြောပြပေးမှာပါ။
COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆေးရုံတွေနဲ့ လူထုပညာပေး လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးဖို့ စက်ပစ္စည်း ကရိယာတွေကို မိတ္တီလာမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာတက္ကသိုလ် (MAEU) က အင်ဂျင်နီယာတွေကတီထွင်ဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေတီထွင်ပြီး အကူအညီပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် သုတေသနဌာန ပါမောက္ခဌာနမှုး ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်က ပြောပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. ။“မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ပစ္စည်း ၄ မျိုး တီထွင်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမပစ္စည်းးကတော့ အဝေးထိန်းနည်းပညာကို သုံးပြီးတော့ သွားနိုင်တဲ့ robot trolley နဲ့ နောက်တခုကတော့ အဝေးထိန်းနည်းပညာကို သုံးထားတဲ့ robot spray – robot sprayer ပေါ့နော်။ ဆေးဖြန်းတဲ့စက်နဲ့ နောက်တခုကတော့ ပြည်သူတွေကို ကိုဗစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာတွေ ပေးနိုင်တဲ့ နှိုးဆော် ပေးနိုင်တဲ့speaker drone ။ နောက်ဆုံး တခု က ဆေးဖြန်း ဒရုံးပေါ့နော်။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် မောင်းသူမဲ့ဆေးဖြန်းဒရုံးပေါ့နော်။ ဒီ ၄ မျိုးကို ကျနော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာ တက္ကသိုလ် အနေနဲ့ တီထွင် ပြီးတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ တဆင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပေးအပ်ပြီးတော့ အသုံးချ လုပ်ငန်းတွေမှာ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။”
robot trolley ကိုဘာကြောင့်တီထွင်ရတာပါလဲ။
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. ။“အဲဒီရောဂါက စဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံနဲ့ ဝေဘာဂီက ဆရာဝန်မကြီးတွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါမှာ ထရော်လီ လိုအပ်ပါတယ်။ လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု contact အနဲဆုံး ဖြစ်စေဖုိ့ ပေါ့နော်။ ဒါမျိုး ကြားသိရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ် အနေနဲ့လည်း လုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိလာတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က အဝေးထိန်းစံနစ်သုံးတဲ့ robot trolley ကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ positive လူနာတွေနဲ့ အထိတွေ့ အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပေါ့နော်။
မေး။. ။“ဆရာတို့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကို ပေးပို့တဲ့ robot trolley နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နဲနဲ ရှင်းပြပေးပါဆရာ၊ ဘယ်လိုသုံးရတယ် ဆိုတာလေ။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဒီ robot trolley ထဲမှာ ပါတာတွေကတော့ အဝေးထိန်း remote control စံနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တခါ ထမင်းဘူး၊ ၂၀ - ၃၀ အထိ သယ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အကန့် ၂ ကန့် ပါဝင်ပါတယ်။ နောက် remote control ကို မောင်းနှင်တဲ့ အခါ လွယ်ကူဖို့နဲ့ လူနာဆီ ရောက်မရောက်ကို သိရှိဖို့ အတွက် တိုက်ရိုက် real time ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ကင်မရာ အမျိုးအစားတွေ ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါဆိုတော့ ကျနော်တို့က အဲဒီ remote control ကိုလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုတဲ့နေရာတွေကို ရောက်အောင် အတွက် အသုံးပြုမှု အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်အောင်လည်း တီထွင်ထားပါတယ်။ နောက်တခါ ဘက်ထရီစံနစ်ကိုလည်း အချိန်ကြာကြာနဲ့ အကြိမ် အရေအတွက် များများ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ ဘက်ထရီစံနစ်တွေ ကိုလည်း ဗို့အားများတဲ့ စံနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ထည့်သွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။. ။“ဆရာတို့ ထရော်လီ ဘယ်နှစ်ခု လောက်များ လုပ်ပြီးတော့ လှူ ဖြစ်ပါသလဲ ဆရာ”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. ။“ထရော်လီကတော့ ပထမဆုံး အရေးပေါ် အနေနဲ့တုန်းက တခု တီထွင်ပြီးတော့၊ နောက်တော့ ကျန်တဲ့တခြား အလှူရှင် တွေကလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါ ဆိုတာနဲ့ ကျန်တဲ့ အလှူရှင်တွေအတွက် အလှူရှင်တွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ပေါ့နော်။ နောက်ထပ် ၂ ခု လှူဒါန်းပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။. ။“ကြမ်းပြင်တွေ ဆေးဖြန်းဖို့ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတဲ့ စက်ကရော ဆရာ။ အဲဒါနဲနဲ ရှင်းပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. “အဲဒီ ထရော်လီ လုပ်နေတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာပဲ ဝေဘာဂီက ကြမ်းခင်း ဆေးဖြန်းတဲ့ စက်လိုအပ်တယ်လို့သိရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့က ကြမ်းခင်း ဆေးဖြန်းတဲ့ အဝေးထိန်းစံနစ်ပါတဲ့ sprayer robot ကို တီထွင်ခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။ အဲ သူ့မှာလည်း ရှေ့မှာက ဆေးဖြန်းသွားမယ်။ အလယ်မှာ ဆေးဖြန်းပုံး တင်ထားတယ်။ အနောက်မှာ အဲဒီ ဆေးဖြန်းထားတာတွေကို သုတ်ဖို့အတွက် အမွှေးပွ အဝတ်တွေ ပါတာပေါ့နော်။ အရှေ့မှာ ဖြန်းမယ် အနောက်က တခါထည်း သုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ real time ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ကင်မရာ ပါတာပေါ့နော်။ နောက် ကျနော်တို့ ဘာစဉ်းစား လိုက်သလဲ ဆိုတော့ တကယ်လို့ သူက သွားရင်း ကုတင်အောက်တွေ ဘာတွေ သွားတာ ပြုတာ တွေမှာ တိုက်မိတာတွေ ရှိနိုင်တယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါ ဆိုရင် ဒါဟာ ရိုဘော့ဟာ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲနိုင်တာကြောင့် ရိုဘော့ရဲ့ ဘေးပတ်လည်မှာ တခုခုနဲ့ တိုက်မိရင် လည်ပြီးတော့ သူ့အလိုလိ်ု လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်။ ထစ် မနေအောင်လို့ ဘာတွေထည့်ထားလည်း ဆိုတော့ ဘီးပေါ့။ ဘီးတွေကို ဒေါင့်လေးဒေါင့်မှာ ထည့်ထားတဲ့ အခါကျတော့ ဒီဘီးက ကုတင်နဲ့ပဲ တိုက်တိုက် နံရံနဲ့ပဲ တိုက်တိုက် သူ့ဟာသူ အလိုအလျှောက် ချော်ပြီးတော့ ထွက်သွားမယ် ပေါ့နော်။ အဲဒီအထိ တွက်ပြီး အသေချာ စဉ်းစားပြီးတော့ အဝေးထိန်းစံနစ် ပါတဲ့ ရိုဘော့ ဆေးဖြန်းစက်ကို ဝေဘာဂီအတွက် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။. ။“ကိုဗစ်အချိန်မှာ ဆရာ စောစောက ပြောတဲ့ ပညာပေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အထောက်အကူ ပေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပေးတာပါလဲ ဆရာ။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။. ။“ ဟုတ်ကဲ့ အဓိက COVID-19 ရောဂါ က ပထမဦးဆုံး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတာပေါ့နော် ။ အဲဒီတော့ အရေးကြီးတာကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက ဒီကပ်ရောဂါအကြောင်းနားလည်ဖို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ပေါ့နော။် ဒီအချိန်ကာလဟာ ဒါပထမဦးဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာနှိုးဆော်ဖို့၊ အသိပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ ဒီလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါက ရောဂါအသစ်လည်းဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး နောက်ပြီးတော့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ထိထိရောက်ရောက်လည်း ပြည်သူတွေဆီကို အမြန်ရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတွေကြောင့်မို့ ဒါ ကျနော်တို့က Drone ကို အသုံးချပြီးတော့ Drone အပေါ်မှာ Speaker တပ်ပြီးတော့ အမြင့်ပေမီတာ ၅၀ ခန့်ကနေပြီးတော့ အသုံးချပြီး အောက်ကနေ မိုက်နဲ့ အော်မယ်၊ တခါ အသံသွင်းထားမယ် ကိုယ်ပြောချင်တာကို ။ ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် တရပ်ကွက်ကို Drone နဲ့ ၂ ခါလောက်တက်လိုက်ရင် ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့လူတွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ထိထိမိမိနဲ့ သိရှိရမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အဲလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။။“ဆိုတော့ ဆရာ အခုအသုံးချနေပါပြီလား။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ Speaker drone ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ covid စတဲ့ first phase မှာကတည်းကိုက ကျနော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်ကို Speaker drone ကိုအသုံးချပြီးတော့ အသိပေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ”
မေး။. ။“အသိပညာပေးတာ အပြင် ဆေးဖြန်းတာကရော ဘယ်နေရာတွေမှာ လုပ်ပါလဲဆရာ။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်။။“ ဆေးဖြန်းဒရုံးကို ကျနော်တို့ကတော့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကို ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါလို့ ပြောလိုက်တာ ပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဆေးဖြန်းခြင်းက တခြား side effect ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်တာ ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့က ဆေးဖြန်း ဒရုံးကိုတော့ လူတွေနဲ့ အနီးဆုံး မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့က ဘာအတွက် ရည်ရွယ် ထားသလဲ ဆိုတော့ ဒီ ကွာရင်တိုင်း စင်တာတွေ လုပ်မယ့် နေရာတွေမှာ လူမရောက်ခင် ပေါ့နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကွာရင်တိုင်း စင်တာတွေ ပြီးပြီး နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ ကွာရင်တိုင်း စင်တာတွေက လူတွေဖယ်ပြီး နောက်ပိုင်း။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ဆေးရုံတွေက လူတွေဖယ်ပြီး နောက်ပိုင်း ဒါမှ မဟုတ်လည်း ဆေးရုံအသစ်တွေ လုပ်တဲ့ အခါမှာ ဆေးဖြန်းတဲ့ လုပ်ငန်း ဒါမျိုးတွေကတော့ အသုံးတဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လူတွေ ကြားထဲမှာ အမှုန်အစက်တွေက မလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ ရောက်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့ လူမရှိတဲ့ နေရာမျိုး တွေမှာ၊ လူမရောက်သေးတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ ဒါမှမဟုတ်လည်း ညပေါ့နော်။ ညပိုင်းတွေမှာ ဒါမျိုးတွေ အသုံးချပြီးတော့ ဆောင်ရွက် နိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒေါက်တာသဲမောင်မောင်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
COVID-19 ကပျရောဂါနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ဆေးရုံတှနေဲ့ လူထုပညာပေး လုပျငနျးတှမှော သုံးဖို့ စကျပစ်စညျး ကရိယာတှကေို မိတ်တီလာမှာ ရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ လကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာတက်ကသိုလျ (MAEU) က အငျဂငျြနီယာတှကေ တီထှငျဖနျတီးပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ဘယျလိုပစ်စညျးတှတေီထှငျပွီး အကူအညီပေးခဲ့တယျ ဆိုတာကို မောငျးသူမဲ့လယောဉျ သုတသေနဌာန ပါမောက်ခဌာနမှုး ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျက ပွောပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. ။“မွနျမာနိုငျငံ ကိုဗဈရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လုပျငနျးတှမှော အထောကျအကူ ဖွဈဖို့အတှကျ ကနြျောတို့ ပစ်စညျး ၄ မြိုး တီထှငျပွီး ဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါတယျ။ ပထမပစ်စညျးးကတော့ အဝေးထိနျးနညျးပညာကို သုံးပွီးတော့ သှားနိုငျတဲ့ robot trolley နဲ့ နောကျတခုကတော့ အဝေးထိနျးနညျးပညာကို သုံးထားတဲ့ robot spray – robot sprayer ပေါ့နျော။ ဆေးဖွနျးတဲ့စကျနဲ့ နောကျတခုကတော့ ပွညျသူတှကေို ကိုဗဈနဲ့ဆိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေး အသိပညာတှေ ပေးနိုငျတဲ့ နှိုးဆျော ပေးနိုငျတဲ့ speaker drone ။ နောကျဆုံး တခု က ဆေးဖွနျး ဒရုံးပေါ့နျော။ ကိုဗဈရောဂါ ကာကှယျဖို့ ပိုးသတျဆေးဖွနျးတဲ့ လုပျငနျးတှမှော ဆောငျရှကျပေးနိုငျဖို့ အတှကျ မောငျးသူမဲ့ဆေးဖွနျးဒရုံးပေါ့နျော။ ဒီ ၄ မြိုးကို ကနြျောတို့ရဲ့ မွနျမာနိုငျငံ လကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာ တက်ကသိုလျ အနနေဲ့ တီထှငျ ပွီးတော့ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနကနေ တဆငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကို ပေးအပျပွီးတော့ အသုံးခြ လုပျငနျးတှမှော စီစဉျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။”
robot trolley ကိုဘာကွောငျ့တီထှငျရတာပါလဲ။
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. ။“အဲဒီရောဂါက စဖွဈလာတဲ့ အခြိနျမှာ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံနဲ့ ဝဘောဂီက ဆရာဝနျမကွီးတှေ၊ တတျသိပညာရှငျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတဲ့ အခါမှာ ထရျောလီ လိုအပျပါတယျ။ လူနာတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ contact အနဲဆုံး ဖွဈစဖေုိ့ ပေါ့နျော။ ဒါမြိုး ကွားသိရတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ ကနြျောတို့ တက်ကသိုလျ အနနေဲ့လညျး လုပျဖို့ ဆန်ဒရှိလာတာပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့က အဝေးထိနျးစံနဈသုံးတဲ့ robot trolley ကို ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ အတှကျ ရညျရှယျပွီးတော့ positive လူနာတှနေဲ့ အထိတှေ့ အနညျးဆုံး ဖွဈအောငျ ပေါ့နျော။
မေး။. ။“ဆရာတို့ ဝဘောဂီဆေးရုံကို ပေးပို့တဲ့ robot trolley နဲ့ ပတျသကျပွီး နဲနဲ ရှငျးပွပေးပါဆရာ၊ ဘယျလိုသုံးရတယျ ဆိုတာလေ။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ ဒီ robot trolley ထဲမှာ ပါတာတှကေတော့ အဝေးထိနျး remote control စံနဈတှေ ပါဝငျပါတယျ။ နောကျတခါ ထမငျးဘူး၊ ၂၀ - ၃၀ အထိ သယျဆောငျနိုငျဖို့ အတှကျ အကနျ့ ၂ ကနျ့ ပါဝငျပါတယျ။ နောကျ remote control ကို မောငျးနှငျတဲ့ အခါ လှယျကူဖို့နဲ့ လူနာဆီ ရောကျမရောကျကို သိရှိဖို့ အတှကျ တိုကျရိုကျ real time ကွညျ့ရှုနိုငျတဲ့ ကငျမရာ အမြိုးအစားတှေ ပါဝငျပါတယျခငျဗြ။ အဲဒါဆိုတော့ ကနြျောတို့က အဲဒီ remote control ကိုလညျး ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ၊ လှယျလှယျကူကူနဲ့ လိုတဲ့နရောတှကေို ရောကျအောငျ အတှကျ အသုံးပွုမှု အလှယျကူဆုံး ဖွဈအောငျလညျး တီထှငျထားပါတယျ။ နောကျတခါ ဘကျထရီစံနဈကိုလညျး အခြိနျကွာကွာနဲ့ အကွိမျ အရအေတှကျ မြားမြား ဆောငျရှကျနိုငျအောငျလို့ ဘကျထရီစံနဈတှေ ကိုလညျး ဗို့အားမြားတဲ့ စံနဈတှကေို အသုံးပွုပွီး ထညျ့သှငျးထားပါတယျခငျဗြ။”
မေး။. ။“ဆရာတို့ ထရျောလီ ဘယျနှဈခု လောကျမြား လုပျပွီးတော့ လှူ ဖွဈပါသလဲ ဆရာ”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. ။“ထရျောလီကတော့ ပထမဆုံး အရေးပျေါ အနနေဲ့တုနျးက တခု တီထှငျပွီးတော့၊ နောကျတော့ ကနျြတဲ့တခွား အလှူရှငျ တှကေလညျး ဆောငျရှကျပေးပါ ဆိုတာနဲ့ ကနျြတဲ့ အလှူရှငျတှအေတှကျ အလှူရှငျတှရေဲ့ အထောကျအပံ့နဲ့ ပေါ့နျော။ နောကျထပျ ၂ ခု လှူဒါနျးပေး နိုငျခဲ့ပါတယျ။
မေး။. ။“ကွမျးပွငျတှေ ဆေးဖွနျးဖို့ ပိုးသတျဆေးဖွနျးတဲ့ စကျကရော ဆရာ။ အဲဒါနဲနဲ ရှငျးပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. “အဲဒီ ထရျောလီ လုပျနတေဲ့ အခြိနျ အတှငျးမှာပဲ ဝဘောဂီက ကွမျးခငျး ဆေးဖွနျးတဲ့ စကျလိုအပျတယျလို့သိရတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ကနြျောတို့က ကွမျးခငျး ဆေးဖွနျးတဲ့ အဝေးထိနျးစံနဈပါတဲ့ sprayer robot ကို တီထှငျခဲ့တာပါ ခငျဗြ။ အဲ သူ့မှာလညျး ရှမှေ့ာက ဆေးဖွနျးသှားမယျ။ အလယျမှာ ဆေးဖွနျးပုံး တငျထားတယျ။ အနောကျမှာ အဲဒီ ဆေးဖွနျးထားတာတှကေို သုတျဖို့အတှကျ အမှေးပှ အဝတျတှေ ပါတာပေါ့နျော။ အရှမှေ့ာ ဖွနျးမယျ အနောကျက တခါထညျး သုတျသှားမယျပေါ့နျော။ နောကျတခုက ကနြျောတို့ real time ကွညျ့ရှုနိုငျတဲ့ ကငျမရာ ပါတာပေါ့နျော။ နောကျ ကနြျောတို့ ဘာစဉျးစား လိုကျသလဲ ဆိုတော့ တကယျလို့ သူက သှားရငျး ကုတငျအောကျတှေ ဘာတှေ သှားတာ ပွုတာ တှမှော တိုကျမိတာတှေ ရှိနိုငျတယျ ပေါ့နျော။ အဲဒါ ဆိုရငျ ဒါဟာ ရိုဘော့ဟာ သှားရေးလာရေး ခကျခဲနိုငျတာကွောငျ့ ရိုဘော့ရဲ့ ဘေးပတျလညျမှာ တခုခုနဲ့ တိုကျမိရငျ လညျပွီးတော့ သူ့အလိုလို လမျးကွောငျးအတိုငျး ဖွဈသှားအောငျပေါ့နျော။ ထဈ မနအေောငျလို့ ဘာတှထေညျ့ထားလညျး ဆိုတော့ ဘီးပေါ့။ ဘီးတှကေို ဒေါငျ့လေးဒေါငျ့မှာ ထညျ့ထားတဲ့ အခါကတြော့ ဒီဘီးက ကုတငျနဲ့ပဲ တိုကျတိုကျ နံရံနဲ့ပဲ တိုကျတိုကျ သူ့ဟာသူ အလိုအလေြှာကျ ခြျောပွီးတော့ ထှကျသှားမယျ ပေါ့နျော။ အဲဒီအထိ တှကျပွီး အသခြော စဉျးစားပွီးတော့ အဝေးထိနျးစံနဈ ပါတဲ့ ရိုဘော့ ဆေးဖွနျးစကျကို ဝဘောဂီအတှကျ ကနြျောတို့ ဆောငျရှကျပေး နိုငျခဲ့ပါတယျ။
မေး။. ။“ကိုဗဈအခြိနျမှာ ဆရာ စောစောက ပွောတဲ့ ပညာပေး လုပျငနျးတှအေတှကျ အထောကျအကူ ပေးတယျဆိုတာ ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ ပေးတာပါလဲ ဆရာ။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။. ။“ ဟုတျကဲ့ အဓိက COVID-19 ရောဂါ က ပထမဦးဆုံး ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဖွဈနတောပေါ့နျော ။ အဲဒီတော့ အရေးကွီးတာကတော့ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှကေ ဒီကပျရောဂါအကွောငျးနားလညျဖို့ ဘယျလိုကာကှယျရေးလုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျရမလဲဆိုတာ သိဖို့ပေါ့နော။ျ ဒီအခြိနျကာလဟာ ဒါပထမဦးဆုံးလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ ဒါဟာ နှိုးဆျောဖို့၊ အသိပေးလုပျငနျးတှလေုပျဖို့ ဒီလုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျဖို့ အရေးပါတဲ့ လုပျငနျးတခုဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒါက ရောဂါအသဈလညျးဖွဈတယျ။ ဘယျလိုကာကှယျရမှနျးလညျးမသိဘူး နောကျပွီးတော့ အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ ထိထိရောကျရောကျလညျး ပွညျသူတှဆေီကို အမွနျရောကျခငျြတယျပေါ့နျော။ အဲဒါတှကွေောငျ့မို့ ဒါ ကနြျောတို့က Drone ကို အသုံးခပြွီးတော့ Drone အပျေါမှာ Speaker တပျပွီးတော့ အမွငျ့ပမေီတာ ၅၀ ခနျ့ကနပွေီးတော့ အသုံးခပြွီး အောကျကနေ မိုကျနဲ့ အျောမယျ၊ တခါ အသံသှငျးထားမယျ ကိုယျပွောခငျြတာကို ။ ဒါမြိုးလုပျမယျဆိုရငျ တရပျကှကျကို Drone နဲ့ ၂ ခါလောကျတကျလိုကျရငျ ရပျကှကျမှာရှိတဲ့လူတှကေို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ထိထိမိမိနဲ့ သိရှိရမယျဆိုတာ ကနြျောတို့ အဲလိုရညျရှယျခကျြနဲ့ပေါ့နျော ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။”
မေး။ ။“ဆိုတော့ ဆရာ အခုအသုံးခနြပေါပွီလား။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။ ။ ဟုတျကဲ့ ကနြျောတို့ Speaker drone ကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ covid စတဲ့ first phase မှာကတညျးကိုက ကနြျောတို့ ရနျကုနျတိုငျးမှာ ရှိတဲ့ မွို့နယျ ၆ မွို့နယျကို Speaker drone ကိုအသုံးခပြွီးတော့ အသိပေးလုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျခငျဗြ”
မေး။. ။“အသိပညာပေးတာ အပွငျ ဆေးဖွနျးတာကရော ဘယျနရောတှမှော လုပျပါလဲဆရာ။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျ။ ။“ ဆေးဖွနျးဒရုံးကို ကနြျောတို့ကတော့ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနကို ပို့ဆောငျ ပေးခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ သူတို့ လုပျငနျး လိုအပျခကျြပျေါ မူတညျပွီး ဆောငျရှကျပါလို့ ပွောလိုကျတာ ပေါ့နျော။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဆေးဖွနျးခွငျးက တခွား side effect ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးတှလေညျး ရှိကောငျး ရှိနိုငျတာ ပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့က ဆေးဖွနျး ဒရုံးကိုတော့ လူတှနေဲ့ အနီးဆုံး မဖွဈဖို့ လိုအပျတာပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့က ဘာအတှကျ ရညျရှယျ ထားသလဲ ဆိုတော့ ဒီ ကှာရငျတိုငျး စငျတာတှေ လုပျမယျ့ နရောတှမှော လူမရောကျခငျ ပေါ့နျော။ ဒါမှမဟုတျလညျး ကှာရငျတိုငျး စငျတာတှေ ပွီးပွီး နောကျပိုငျးပေါ့နျော။ ကှာရငျတိုငျး စငျတာတှကေ လူတှဖေယျပွီး နောကျပိုငျး။ ဒါမှ မဟုတျလညျး ဆေးရုံတှကေ လူတှဖေယျပွီး နောကျပိုငျး ဒါမှ မဟုတျလညျး ဆေးရုံအသဈတှေ လုပျတဲ့ အခါမှာ ဆေးဖွနျးတဲ့ လုပျငနျး ဒါမြိုးတှကေတော့ အသုံးတဲ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါက လူတှေ ကွားထဲမှာ အမှုနျအစကျတှကေ မလိုအပျတဲ့ နရောတှေ ရောကျနိုငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့ လူမရှိတဲ့ နရောမြိုး တှမှော၊ လူမရောကျသေးတဲ့ နရောမြိုးတှမှော ဒါမှမဟုတျလညျး ညပေါ့နျော။ ညပိုငျးတှမှော ဒါမြိုးတှေ အသုံးခပြွီးတော့ ဆောငျရှကျ နိုငျမယျ ဆိုရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျခငျဗြ။”
ဒေါကျတာသဲမောငျမောငျရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။
COVID-19 ရောဂါ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အီဂျစ်စက်ရုပ်